कोरियामा अर्को ज्ञानु रेग्मी नजन्मियोस्
Warning: getimagesize(article_uploaded_files/162ebpuru_camara.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
गत जनवरी १६ का दिन छनान् स्थित धातु कम्पनीमा काम गर्दै आफ्नै कोठामा आत्महत्या गरेका मृतक ज्ञानु रेग्मीको पार्थिव शरीर आज जनवरी २२ का दिन थाई एयरको उडानबाट स्वदेश पठाइएको छ । नेपाल र कोरिया बीचको श्रम सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको खर्चमा उनको शरीर नेपाल पठाइएको हो ।
३ दिन अगाडी उनको शरीरको पोष्ट मार्टम गरिएको थियो तर रिपोर्ट आउन करीब १ हप्ता समय लाग्ने भएका कारण हालसम्म रिपोर्ट आएको छैन तर प्रहरीको पूर्व रिपोर्ट अनुसार मृतक रेग्मीको शरीरमा कुनै चोटपटक नभएको उनको शरीर माथी कुनै किसिमको हात हतियारहरु प्रयोग नभएको देखिएको छ । उनको शरीरको भित्री रिपोर्ट भने अर्को हप्ता आउने छ र त्यसलाई हामी पुनः सम्प्रेषण गर्नेछौं ।
कोरियामा अर्को ज्ञानु रेग्मी जन्मन सक्ने चिन्ता ?
मृतक ज्ञानु रेग्मीले आत्महत्या गरेपछि उनको यो आत्महत्यामा शंका उत्पन्न भएको र यसको छानबिन राम्रोसंग हुनुपर्ने जस्ता खबरहरु नेपाल कोरिया न्युजको वेभसाईटमा संप्रेषण गर्यौ । आत्महत्या पछि पुलिसले खिचेको उनको फोटो पनि त्यससंगै संप्रेषण गर्यौ । नेपाल कोरिया न्युज डट कमका सम्पादक रघु त्रिपाठीको कठोर प्रयासबाट मृतकको मृत्युबारे स्थलगत रिपोर्ट थियो त्यो समाचार । निक्कै भयावह थियो त्यो घटना । त्यही समाचारका कारण संप्रेषण भएको केही दिन मै हाम्रा सम्पादक रघु त्रिपाठीको फोनको घण्टी बज्यो । फोन एकजना नेपाली मजदुरले गरेका थिए ।
फोटोको दृष्य भयावह भएकोले उनले वहाँलाई त्यो फोटो हटाईदिन अनुरोध गरे र त्यस अनुरोधसंगै आफ्ना मनका कुराहरु पनि प्रकट गरे "यस्ता किसिमको घटनाले हामीलाई पनि निराश बनाएको छ, यहाँको वातावरणबाट त्यस किसिमको घटनालाई दोहोर्याउन हतोत्साहित बनाएको छ" उनले भनेका थिए । फोनमा कुरा भए लगत्तै फोनमा अनुरोध भए अनुरुप त्यस फोटोको सट्टा प्रधानमन्त्री नेपालसंग हात मिलाइरहेको मृतकको फोटो पोष्ट भयो ।
सउल दोङ्देमुन स्थित एक चर्चका पाष्चर जोएल पनि यस कुराप्रति सहमति राख्छन् । उनी कोरिया माइग्रेन्ट वर्कर सेन्टरमा कोरियन दोभाषेको काम पनि गर्नुहुन्छ जसबाट उनको धेरै नेपालीहरुसंग सम्पर्क पनि रहेको छ । काम नपाउंदा तलब नपाउंदा र अन्य कुनै किसिमको समस्या पर्दा सहयोग गर्ने गर्छन् उनी काम गर्ने माइग्रेन्ट सेन्टरले । त्यही सेन्टर मार्फत सहयोग पुर्याउने सिलसिलामा उनले धेरै नेपाली मजदुरहरुमा डिप्रेसन जस्ता समस्याहरु पाइएको कुरा बताउनु हुन्छ ।
मृतक ज्ञानु रेग्मीको घटनामा सबैको ध्यान आकर्षित गर्न त्यस घटनालाई मुख्य समाचार बनाईंदा पनि यस्तो भयावह घटनाप्रति कसैको ध्यान गएको देखिएन । मृतक रेग्मी रौतहट निगाहपुर निवासी हुन् । कोरियामा रौतहटवासीहरु धेरै नभएर हो या उनको जातको कुनै संस्था नभएर हो कोरियाका कुनै पनि संघसंस्थाहरुले त्यस घटनाप्रति चासो दिएको पाइएन । उनी नेपाली हुन् तर पनि नेपाली राजदूतावासको चासो पाइएन । नेपालको कुनैपनि सरकारलाई त लाचार नै मान्छौं हामी । किनकि नेपाल सरकारको पहुंच नेपाल बाहिर कहींपनि छंदै छैन । त्यसैले यस किसिमको घटनाबाट नेपाली कामदारहरु निराश नहुन सक्दैनन् र अर्को ज्ञानु रेग्मी नजन्मेला भन्न सकिन्न ।
कोरियामा हामी यस्ता छौं कि कुनै 'क' नामको जिल्लावासीलाई केही पर्यो भने 'क' जिल्लाको नामले स्थापित संस्था अघि लाग्छन् । 'ख' जातको मान्छेलाई कुनै समस्या पर्यो भने 'ख' जातसंग जोडिएको संस्था नै अग्रसर हुन्छ । तर रेग्मी जस्तै मान्छेलाई केही पर्यो भने सहयोग नपाउने नै हो त ? नेपालीको नाताले कसैबाट सहयोग नपाउनु के यो नियम नै हो र ? मृतक रेग्मीको कथा यहिं त भयावह छ भने उनको शरीर उनको परिवार समक्ष पुगेपछि कस्तो हुने हो त्यो कल्पना गर्न पनि सकिन्न ।
हुलदङ्गामा घाइते भयो या मृत्यु नै भयो भने शहिद घोषणा गर्ने नेपालको चलन छ । तर उनी त रेमिट्यान्स भित्राउने मान्छे हो । एक प्रकारले नेपालको आर्थतन्त्रको ख्याल राख्ने मान्छे हो उनी । अब उनलाई के भनेर घोषणा गर्ने त ? कसैसंग छैन यसको उत्तर ।
यस घटना प्रति कसैको चासो नभएता पनि भबिष्यमा यस किसिमको घटना पुनः दोहोर्याउन नदिन कोरियाका सबै संस्थाहरुका तर्फबाट पहल गरियोस् । कोरियाका सबै नेपालीहरुमा आफ्ना मित्रहरुसंग कोरिया बसुन्जेल सबैसंग मिलेर, हाँसेर, खुशी भई समयको सदुपयोग गर्ने बिचार उत्पन्न होस् । भविष्यमा अब उप्रान्त फेरि अर्को ज्ञानु रेग्मी नजन्मिउन् । सबैलाई चेतना भया ।